Budata vidiyo Instagram ➵ Budata vidiyo Instagram, vidiyo vidiyo, foto, akụkọ na vidiyo IGTV site na akaụntụ Instagram gị ma ọ bụ nke ọhaneze ọ bụla.
Na-eji nke ochie. Pịa ebe a iji wụnye ụdị kachasị ọhụrụ 1.0.1
Budata vidiyo Instagram
❝Foto Instagram, vidiyo, na nbudata IGTV.❞
➶ Budata vidiyo Instagram, vidiyo vidiyo, foto, akụkọ na vidiyo IGTV site na akaụntụ Instagram gị ma ọ bụ nke ọhaneze ọ bụla.
Weebụsaịtị tumadi ibudata vidiyo MP4 na Instagram na ntanetị site na iji Instagram Video Downloader. Chekwaa IGTV, budata profaịlụ IG na vidiyo na obi obi. Adịchaghị mma, enweghị ndebanye - nwalee ugbu a.
Ihe nbudata Instagram na-enye gị ohere ibudata vidiyo ma ọ bụ chekwaa foto na Instagram ozugbo na PC gị, mbadamba ma ọ bụ ekwentị gam akporo. ➥ Wụnye ugbu a
Etu esi ebudata vidiyo na Instagram
Soro usoro atọ a dị mfe na nbudata obi ụtọ!
Mgbe ịbanye na akaụntụ Instagram gị, pịa ellipses dị n'akụkụ aka nri aka nri nke vidiyo ịchọrọ ibudata ma họrọ Detuo njikọ.
Mgbe e depụtaghachiri post url, pịa nri gị ka ị pịa URL ebe a na igbe ederede dị n'elu wee pịa igodo.
Ihe nbudata vidiyo nke Instagram anyị ga-ewepụta njikọ vidiyo vidiyo dị elu MP4, ma ị nwere ike ịhọrọ ibudata ụdị mma ịchọrọ.
Etu ibudata vidiyo Instagram na mgbatị Chrome na mgbakwunye Firefox
🧐 Kwa ụbọchị, a na-etinye ọtụtụ nde foto na Instagram. Nke a na - eme ka ọ bụrụ ngwa foto kachasị ewu ewu na mbara ala. You na-ahụkarị onyonyo naanị ị ga-edobe. N'ezie, ị nwere ike ịchekwa foto na ngwa ahụ na nhọrọ nke iji nseta ihuenyo na ekwentị. Ma, n'ikpeazụ ị nwekwara ike ịchọrọ ịchekwa ihe oyiyi na ekwentị gị ma ọ bụ kọmputa na mkpebi dị elu. Gbalịa ịpịa usoro maka ibudata foto Instagram, vidiyo na akụkọ na ogo HD.
Mepee weebụsaịtị nke Instagram.
Kpọọ vidiyo na Instagram.
Mepee ihe nbudata vidiyo nke Chrome Chrome / Firefox ➥ Wụnye ugbu a
Pịa na njirimara ịchọrọ ibudata.
Na taabụ ọhụrụ, faịlụ ahụ ga-ebudata na-akpaghị aka wee chekwaa na ngwaọrụ gị.
🚀 Kedu ka ngwá ọrụ a si arụ ọrụ?
Mgbe ị mepee ngwá ọrụ a, a ga-egbu otu koodu na taabụ dị ugbu a. Koodu a bu oru nyocha koodu json ma choputa id nke post nke n’egosi na ihuenyo. A na-eleghara ozi ndị na-apụtaghị na igbe ihuenyo.
Mgbe ịchọta post id, ngwá ọrụ ahụ na-aga n'ihu izipu arịrịọ na Instagram iji nweta data json. Igodo nbudata ahụ ga-egosi n'okpuru ọkwa ọ bụla na n'ime windo ngwaọrụ.
Nwere ike ilele ma buo ibu avata jiri ogo kacha elu. Detuo ID na hashtag ngwa ngwa na posts.
Mara: Ngwaọrụ a na-akwado ibudata faịlị nke Instagram kwadoro. Mgbatị a anaghị enye ohere ịnweta weebụsaịtị ọ bụla, yabụ ndị ọrụ enweghị ike ibudata vidiyo site na posts ndị agbakwunyere na weebụsaịtị ndị ọzọ.
Uru nke iji Instagram Story Saver
Ndabere akụkọ ma kwado ha ngwa ngwa ma emechaa.
Zọpụta ma zipụ vidiyo nke Instagram ka ọ dịkwuo nkwanye akụkọ akụkọ Instagram banyere njikọ aka, mmasị, na ụmụazụ.
Chekwaa vidiyo Instagram ka ịlele ma emechaa.
Mgbanwe niile ama ama na ọrụ a.
☀ Budata vidiyo Full HD 1080p, HD 720p site na Instagram.
☀ Gbanwee vidiyo Instagram na mp4.
☀ Ihe nbudata ihe ntanetị nke Instagram.
☀ Budata egwu sitere na vidiyo Instagram.
☀ Budata Instagram carousel.
☀ Budata ihe ngosi mmịfe nke Instagram.
☀ Budata akụkọ Instagram.
☀ Chekwaa isi ihe Instagram.
☀ Budata vidiyo IGTV.
☀ Ihe nbudata vidiyo nke onwe nke Instagram.
☀ Onye nlere foto foto nke Instagram.
☀ Nbudata ihe osise nke Instagram
☀ Budata onyonyo mbụ na Instagram.
☀ Budata Instagram thumbnails.
☀ Detuo ederede Instagram.
☀ Na akpaghị aka ibudata na chekwaa faịlụ dị ka aha nke video na họrọ àgwà.
☀ Kachasị maka gam akporo.
☀ Otutu asusu.
☀ Tụọ ajụjụ.
☀ N'ịwa random Keywords.
☀ Gbanwee vidiyo Instagram na mp3.
☀ Budata gif site na Instagram.
☀ Budata ọtụtụ foto Instagram.
☀ Ihe nbudata vidiyo nke Instagram.
☀ Budata vidiyo site na ozi Instagram.
☀ Bugote onyonyo na profaịlụ instagram gị na ibe weebụ ọ bụla.
☀ Na-ebugote vidiyo site na desktọọpụ.
☀ Direct Direct maka weebụ.
☀ Nkọwa aka na Instagram.
☀ Ihe nbudata ozi olu nke Instagram.
☀ Budata foto Instagram niile na zip.
Karịa naanị otu mmekọrịta mmekọrịta, Instagram bụ ụzọ dị mfe, na-atọ ụtọ ma kee ihe iji jide, dezie, ma kesaa foto, vidiyo, na ozi n'etiti ndị enyi na ezinụlọ. Na mgbakwunye na ikwe ka ekike foto na vidiyo, Instagram weputara otu n'ime ngwa a na-ejikarị eme ihe, mkpokọta Instagram Akụkọ nke foto ma ọ bụ vidiyo ma mgbe ezigara ya enwere maka 24h. Mgbe oge a gasịrị, ọ gaghịzi ekwe omume ịhụ ya.
Ihe nbudata vidiyo nke Instagram bụ ngwa weebụ n'ịntanetị iji budata vidiyo Instagram na foto na kọmputa gị ma ọ bụ ekwentị mkpanaaka ozugbo.
Nbudata ihe osise nke Instagram
Ihe nbudata nbudata gi di mfe maka Instagram. Chekwaa foto na vidiyo na ogo mbụ.
Budata vidiyo Instagram nkeonwe
Budata foto ọ bụla ma ọ bụ vidiyo ọ bụla na akaụntụ Instagram nke onwe gị soro.
Free ụgwọ na Nchekwa iji
A na - amịpụta vidiyo niile ozugbo na sava CDN Instagram, na - eme ka ngwa ọrụ a nwee nchebe ọ bụla.
Na-arụ ọrụ nke ọma na ihe nchọgharị ọ bụla
Ihe nbudata vidiyo nke Instagram na-arụ ọrụ nke ọma na Google Chrome, Firefox, Opera, Microsoft Edge na ihe nchọgharị weebụ ọ bụla.
Nbudata ihe nbudata nke Instagram
Ọ bụ ụzọ dị mma nke ibudata vidiyo vidiyo na foto Instagram site na aha njirimara Instagram.
Ihe nbudata ihe omuma nke Instagram
Iji ngwa IG na-ebudata Ngwaọrụ, ị nwere ike ịchekwa vidiyo na foto Akụkọ na sekọnd ole na ole.
Instagram IGTV nbudata
Chekwaa IGTV na ekwenti gi ma obu PC gi - dobe nkuzi bara uru, iyi iyi ya na vidiyo di egwu n’enyeghi ego.
Ihe nlere nke Instagram
Nwere ike ịlele akụkọ niile na-arụ ọrụ na Isi ihe nke akaụntụ Instagram ọhaneze.
Budata Instagram isi ihe
Jiri ngwa ọrụ a ị nwekwara ike ibudata vidiyo IGTV, akụkọ Instagram na isi ihe
Instagram na-amata ihe nbudata
Budata Instagram na-eme vidiyo vidiyo n'ụdị mkpebi dị elu yana egwu egwu.
Nbudata ihe ntanetị nke Instagram
Budata foto Instagram na vidiyo niile na onye ọrụ Instagram ọ bụla.
Lelee foto profaịlụ onye ọ bụla nke Instagram nha ha.
Ihe Nchọpụta Njirimara Instagram
Nweta ma ọ bụ chọta njirimara onye ọrụ Instagram na aha njirimara.
Chọta Ajụjụ na Azịza Gị Ebe a - Olee otu ị ga-esi chekwaa vidiyo Instagram?
+ Ebee ka echekwara vidiyo mgbe ebudatara?
Na-emekarị niile videos na-echekwa n'okpuru Downloads nchekwa. I nwekwara ike pịa CTRL + J na ihe nchọgharị gị iji lelee akụkọ nbudata gị.
+ Kedu ihe nbudata vidiyo nke Instagram?
Ihe nbudata vidiyo nke Instagram bụ ọrụ ntanetị nke na-enye gị ohere ịchekwa ọdịnaya vidiyo na PC ma ọ bụ ekwentị gị. Ngwaọrụ a bụ ụzọ kachasị mfe iji budata vidiyo na-amasị gị ma enweghị ike ibi na-enweghị ngwaọrụ gị.
+ Kedu ihe nbudata ihe nbudata ihe nke Instagram?
Instagram Post Downloader bụ ọrụ na-echekwa foto Instagram ọ bụla na ngwaọrụ ọ bụla.
+ Nbudata ihe nbudata nke Instagram na-echekwa vidiyo ebudatara ma ọ bụ na-edebe otu vidiyo?
Anyị anaghị echekwa vidiyo. Anyi achoghi kwa idebe vidio ndi ebudatara. A na-akwado vidiyo niile na sava nke Instagram. Ọzọkwa, anyị anaghị esochi akụkọ ntaneti nke ndị ọrụ anyị.
+ Kedu ka m ga - esi budata vidiyo nkeonwe na Instagram?
Enwere ụzọ dị iche iche iji budata vidiyo nke Instagram maka akaụntụ nkeonwe. N'ime ha, otu ụzọ bụ ịmata URL nke akaụntụ Instagram nkeonwe site na ịmepụta akaụntụ Instagram ma soro onye ịchọrọ ịma URL nke post ha. Mgbe nnabata onye gi nabatara gi ma oburu na onye ahu akwadoro enyi gi, igha enwe ike ihu vidio ha nile. Iji budata vidiyo ịkwesịrị ịwụnye ndọtị maka Chrome ma ọ bụ Firefox. ➥ Wụnye ugbu a
+ Gini mere iji choo Instagram Image Downloader?
Nke mbụ, ọ na-azọpụta oge. Kwesighi iwe nseta ihuenyo, dezie ha, wee we iwe na foto adịghị mma. Nke abuo, ị na-enweta foto na-enweghị ihe ọ bụla àgwà ọnwụ.
+ Kedu ihe bụ usoro nke nbudata vidiyo Instagram?
Dabere na njirimara dị nke vidiyo vidiyo Instagram, ihe nbudata vidiyo nke Instagram anyị wepụtara 1080p, HD mma na njikọ vidiyo vidiyo SD. Nwere ike ịhọrọ ibudata bụla ị chọrọ. Ma, n’ọnọdụ ụfọdụ, ogo vidio adịghị mma ma ọ bụ naanị vidiyo dịnụ nwere nke SD.
+ Gịnị bụ IG Akụkọ Downloader?
Instagram Story Downloader bụ ọrụ emere iji chekwaa Akụkọ IG, lelee ha na ntanetị, ma jigharịa ha.
+ Etu esi ebudata vidiyo Instagram na ekwentị gam akporo m?
Ihe nbudata vidiyo nke Instagram adịlarị na Firefox maka ekwentị gam akporo. ➥ Wụnye ugbu a
+ Gini bu Instagram IGTV Downloader?
Ihe ntanetị Instagram IGTV bụ usoro egosipụtara maka ịchekwa vidiyo dị elu site na Instagram TV.
+ Enwere m ike ibudata foto na vidiyo site na onye ọrụ ọ bụla?
Instagram nwere ụdị akaụntụ abụọ: Ọha na nke Onwe. Ihe ndekọ ederede ọha bụ nke onye ọ bụla nwere ike ịlele post ha. Ihe ndekọ nke onwe dịtụ iche n'ihi na ha nwere ike ịlele posts sitere na ha ndị na-eso ha. N'okwu ahụ, Instagram Downloader nwere ike ibudata foto ọ bụla na vidiyo ọ bụla site na ndị ọrụ ọha na eze. Maka ndị ọrụ nkeonwe, ịchọrọ ikikere ha iji lee foto ahụ, belụsọ ma enyere gị ikike, o siri ike ibudata foto Instagram.
+ Ole vidiyo ole m nwere ike ibudata na Instagram?
Ihe nbudata vidiyo nke Instagram enweghị oke, kwa elekere, ụbọchị ma ọ bụ ndị ọzọ. Nwere ike ibudata na Instagram ọtụtụ vidiyo na eserese dịka ịchọrọ.
+ Kedu ihe bụ Instagram Reels?
Instagram Reels bụ obere vidiyo nkekọrịta vidiyo nke Instagram. Ndị ọrụ nwere ike ịkekọrịta obere vidiyo (ihe ruru 15 sekọnd ogologo), yabụ TikTok ọzọ.
+ Enwere m ike ibudata vidiyo ma ọ bụrụ na anaghị m edebanye aha na Instagram?
Mba. Need chọrọ ndebanye aha Instagram iji nwee ike ịbanye ma lelee vidiyo.
+ Kedu ihe kpatara vidiyo m anaghị ebudata?
Enwere ike inwe ndepụta nke ihe kpatara kpatara nsogbu a:
Njikọ ahụ e depụtaghachiri nwere ike ịbụ na-ezighi ezi ma ọ bụ njikọ mebiri emebi.
Edere njikọ ahụ nwere ike ịbụ nke akaụntụ echekwara.
Ederede ahụ depụtaghachiri nwere ike ịnwe onyonyo ma ọ bụghị vidiyo.
+ Ihe ị ga-eme ma ọ bụrụ na vidiyo anaghị ebudata kama ọ na-egwu kama?
Ọ bụrụ na ịnọ na ekwentị mkpanaaka, pịa ma jide vidiyo ruo mgbe nhọrọ nbudata ga-apụta. Na desktọọpụ, pịa akanri na vidiyo ma họrọ Chekwa njikọ dị ka nhọrọ.
+ Enwere m ike ịchekwa vidiyo vidiyo Instagram?
I nweghi ike ichekwa vidiyo vidiyo Instagram ka ị na - enyo ma ị nwere ike ibudata ya ma ha gụchaa.
+ Etu esi ebudata Instagram carousel posts?
Budata ma chekwaa ọtụtụ foto na vidiyo site na Instagram na-eso usoro ole na ole ndị a ... Mepee post carousel nke nwere ihe oyiyi na vidiyo ịchọrọ ibudata. Ọzọ, mepee ndọtị a. Ozugbo ị ga-enweta a njikọ ibudata. ➥ Wụnye ugbu a
+ Kedu ihe bụ Njirimara Onye Ọrụ Instagram?
Ihe karịrị otu ijeri mmadụ na-eji Instagram zuru ụwa ọnụ ma ọnụọgụ na-abawanye na oke ọsọ ọsọ. Agbanyeghị, akaụntụ Instagram ọ bụla nwere NJ ya pụrụ iche a makwaara dị ka ID onye ọrụ nke na-anọchi anya otu akaụntụ. NJ onye ọrụ dị iche na aha njirimara na Instagram n'ụzọ na aha njirimara na-agbanwe agbanwe mana ị nweghị ike ịgbanwe NJ onye ọrụ nke akaụntụ, ọ na-anọgide na otu ruo mgbe ebighị ebi.
+ Kedu ihe bụ nzube nke ịchọta Njirimara Onye Ọrụ Instagram?
Appsfọdụ ngwa na ọrụ ndị ọzọ na-arịọ gị ka ị tinye ID nke onye ọrụ nke akaụntụ. Ọzọkwa site na ịmara njirimara onye ọrụ nke akaụntụ ị nwere ike ịmatakwu ya.
+ Etu esi achọpụta Njirimara Onye Ọrụ Instagram?
Ọ dị mfe iji ngwa a iji chọpụta njirimara onye ọrụ Instagram ma ọ gaghị ewe oge iji mee nke ahụ. Agbanyeghị, enwere ihe dị mkpa nke bụ, ị ga-amata aha njirimara nke akaụntụ ahụ ịchọrọ ịchọpụta NJ. Tinye Aha njirimara nke akaụntụ achọrọ na igbe nchọta. Emechaa, pịa bọtịnụ Nweta Njirimara.
+ Kedu ihe bụ Nkọwa ọnụego Instagram?
A na-atụle ọnụego njikọ site na ole ndị na-eso ụzọ gị na-emekọrịta ma ọ bụ tinye aka na ibe gị. Enwere ike ichebara ụdị ọrụ mmekọrịta ọ bụla na ibe gị. Anyị na-atụle okwu, chekwaa, amasị, ma ọ bụ echiche dị ka ihe nke njikọ aka maka ihe ntinye aka na Instagram.
+ Zọ kachasị mma iji bulie njikọ aka gị na Instagram
Mee ka ndị na-eso ụzọ gị dịkwuo elu site na ịmepụta ọdịnaya mbụ. Jiri ọrụ ahia iji dọta ndị na-ege gị ntị nwere mmasị na ibe gị. Jiri akara ngosi ziri ezi iji bulie nkwa gị. Mgbe nile bulite ọhụrụ posts dị ka na-adịbeghị anya posts bụ mgbe niile n'elu.
Budata Instagram vidiyo na ntanetị Full HD
Ihe nbudata vidiyo nke Instagram na - enyere gị aka iwepụta njikọ njikọta maka vidiyo Instagram ọkacha mmasị gị ma chekwaa ha maka ikiri na ịkekọrịta na ntanetị
Vidio ahụ na-ebudata ma chekwaa ya na ekwentị gị nwere oke mma! Ukwuu tụrụ aro a!
Hụ ngwa a. Enwere m ike ibudata vidiyo na Instagram. Dị Mfe ma dị mfe iji kwa.
Enwere m ike ịchekwaa vidiyo ahụ na gallery m maka iji rụọ ọrụ ma emechaa.
Kasị ngwa ngwa Instagram Downloader.
Ọ bụ ụzọ echedoro iji budata foto Instagram dịka data niile dị na nzuzo ma enweghị ike itinye ya na inye mmadụ mmesi obi nzuzo.
Nbudata akụkọ Instagram na-enweghị aha ka dị mfe.
Instagram Video Downloader Bot - Ngwaọrụ kachasị n'ịntanetị kachasị mma iji budata ma chekwaa vidiyo na foto site na Instagram 2021
Koodu QR findmyfbid downloadgram downloadvideosfrom